MUUQAAL: Wariye Coldoon oo Jigjiga ka Qaaday Heestii Soomaali baan ahay Iyo Barnaamijkii uu ka Qayb galay | KALSHAALE
MUUQAAL: Wariye Coldoon oo Jigjiga ka Qaaday Heestii Soomaali baan ahay Iyo Barnaamijkii uu ka Qayb galay
Oct 9, 2018 - 10 Aragtiyood
Jigjiga ( Kalshaale ) Wariye Cabdimaalik Coldoon oo dhowaan soo gaadhay magaalada Jigjiga ayaaka Qayb galay dood ka Qabsoontay jaamacadda magaalada Jigjiga.
Wuxuu halkaasi ka Qaaday Heestii Caan baxday ee Soomaali baan ahayn, Wuxuuna Dardaaran kala duwan u jeediyey Bulshadii Doodaasi kasoo Qayb gashay ” Soomaali baad tihiin , dhulkanna idinka ayaa leh, xaqna waxa aad u leedihiin in aad aayihiina ka tashataan .”
Inkastoon wali sugeyno Xornimadii Somaligalbeed, hadana Jigjiga waa laga qaadey Kabo Leefkii Tigree.
Waxaa loo fasaxey iney kutukadaan meeshay doonaan,oo qaadaan heestey doonaan.
No meyd Dhaanto-dhaadhaan
No Culumo Musqul Xabsi
No Quraac Xaas ninkeedii marhore kalyaha lagala baxey.
** NO MORE GUBID NAASAHA GABDHAHA SOOMAALIYEED *
iley xataa laguma tilmaamikaro Axmaar.
waa uun sidii kaabanka xamar,marka labarbardhigo waxay sameeyeen hawiye madoobe
cmc vs caydiid ,sidaad adeero ujeceshay magartay cmcm wuxuu ka adkaaday hawiye iyo iidoor ,aabo cabdi idagoo dhanteynaya ayuu soobaxayaa
iley wuxuu xasuuqey Ogaadeen, wuxuu curyaamiyey Ogaadeen.
iley waxaan ku heysanaa dhibkuu u geystey xoola dhaqatada, xataa ku dar kuwa Dir, Hawiye iyo Raxanweyn.
” Ceydiid waa ninka keenay Democrats maanta ka jiro Soomaaliya, markaas ayaad ag dhigeysaa iley oo gabdhaha Ogaadeen Bac dhalaaleyso Naasaha uga gubijirey.
Waryaa @ gaafaw
Soo adigu maadan ahey nin heysto dhalasho CAROOLE AXMED.
Maskii Caroole Axmed iska ilaali.
Waar ninkani geesisanaa @ min caynati sawiye yacni miyanu kabaqayn in lageeyo Birdhaa baytka ilaa katamaa wisti kkkkkk
Waar duqi jaamac Siyaad axmed somali Ha lay waco bal waxuu kayidhaa
War sxb ileen cuqdadloow ayaad ahayd waad ii dhuumatay Waxaan ku modaayay laandheere.
Cabdi ileey cidda uu wax u dhimay waa tolkii ogadeen.
Mujaahid caydiid hadeey Somalida kale neceb tahay. Tolkii ayaa jecel waayoo wuxuu isku dayay in uu tolkii saxaraha kasoo raro ee uu dejiyo dhulka wobiyada. Waana ku guuleystay inta badan.Waayoo maanta beeraha shabeelada hoose ilaa kismaayo. 70% waxaa iska leh madar kicis hiraab. Ma xoogin ee wey iibsadeen. Marka waa qalad in aad isla meel dhigtaa. Ninkii tolkii gumaaday.iyo Ninkii Somalida ka dulqaaday kaligii taliyihii caankaa ahaa. Tolkiina u xaar xaaray dhulka wobiyada. Kkkkkkkkk
War ninyohoow caroole axmedkaasi maskaxdeyda ayey ku wareegayaan.
Gaafaw xariif ayaan moodayay inta badan in aan hadal ku tuuro ayaan jeclaa. Laakiin maanta sidii jugle ayuu u hadalyay.
Jugle cafis hadaan ka xantay adigoo maqan.
Wiilasha yar yar ee xamar wariyayaasha u ah akhlaaq xumadadooda habkay wax u sheegaan una qaldaan intaanu duubnay waraysigoodii baanu dhagaysiinay aadna way uga xumaadeen habdhaqanka somaliya ay ula dhaqanto? Dad sarsare oo hadalkooda la bedelay waxaanu u sheegnay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu kaga gonay runtii badidoodu waa qoom reer somaliya jahli xin xaasidnimo nacayb iyo akhlaaq xumo ku caana guud ahaan
Gaafaw, Aniga-Dabshid iyo FAARAX MACALLIN kenya, waxaa nagu jiro DNA 4 Caroole Axmed.
Ceyr Madarkicis wuxuu u qeybsamaa 4 Caroole Axmed iyo Habar Aji oo gooni ah, sidaan ka dhago dhageeyey Ayeyday.
Gaafaw wuxuu heystaa Visa Ayaanle Ceyr siduu ii sheegay waa markuu Xamar joogo.